Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji ọgba tum tum gafee mba? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Crosszọ igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi ya
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji ọgba tum tum gafee mba?
Nke a bụ ihe ọ dị ka ya site na nọmba sitere n'elu. Anyịgaatụmatụ na aigwe kwụ otu ebe gafee Americanke ahụ gbara puku kilomita anọ gburugburuga-ewerenkezi onye na-agba ọ dịkarịa ala ụbọchị 61 iji wuchaa. Anyị nwere onweigwe kwụ otu ebe gafee Americawere ụbọchị 80, anyị kpuchie ihe dịka kilomita 4,500.12 nke 2015 g.
Mgbe Angie hapụrụ m, adịzi m kilogram 560. Ọ bụ oge kasị ala ná ndụ m. Otu ọnwa mgbe anyị gbasasịrị, ekpebiri m ịgbagharị na mba ahụ dum ka m wee felata.
You kwadebere anaghị m ụgbọala. Anaghị m azụ ụdị egwuregwu ahụ maka na echere m na ọ bụ aghụghọ. Ọzụzụ echiche maka njem njem 3,000 bụ aghụghọ? I kwuru na i mee protein na-eme ka a maa jijiji n'ụtụtụ, mana mgbe ahụ protein gwụ gị, ị ga-eji butter ahụekere na jelii sandwiches na tarts dochie nke ahụ.
Enwere m cola maka nri ụtụtụ. Mgbe ụfọdụ enwere m ike ịnwe achịcha tosta n’etiti ịnya ụgbọ m. Isi ihe bụ imeru ihe n'ókè nwere pupu efere ha, 'nku, osisi moz,' nku na-enweghị ọkpụkpụ na akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ. 'M riri ya ụbọchị niile.
Ikwesiri ichekwa nri gị ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala kilomita ise kwa ụbọchị na mbido. Eeh. Echere m, Achọrọ m ile maapụ.
M bi ebe a na Benedict Canyon. Enwere m ike ịgbada na nke ahụ bụ kilomita ise. Ziri ezi.
Aka m nọ n'ụlọ. Eeh. Ogologo ọsọ ị na-agba ịnyịnya ígwè bụ 9.6 kilomita kwa awa.
Nke ahụ pụtara na kilomita ise ga-ewe nkeji iri atọ. Kedu ihe ị na-eme maka ụbọchị ọzọ? Mgbe m hụrụ nkwa Eric na ntinye onwe ya, m ga-anọ n'akụkụ ya. Eji m okporo osisi were ụgbọala m ruo ihe dị ka izu atọ.
Agakwara m ụlọ ọgwụ ugboro atọ ka mụ na Eric na-agba ịnyịnya ígwè. Were nọrọ na Florida ọnwa atọ. Ọrịa kansa gburu nwanne mama m.
Nwunye m dara ọrịa. Ọ rapaara n'ụlọ ọgwụ. Mama m gbajiri aka.
Aghaghị m ịnọnyere ya, nke ị na-agaghị elekọta nne gị. Si na ịnyịnya gị dị elu pụọ, chere. Ọ dị m nwute na ị na-adọrisị m kpam kpam.
Mba mba mba mba mba. You nwere ike nweta onwe gị ịbụ onye ezi omume na ihu abụọ niile ị chọrọ, mana ka anyị gụọ ụbọchị ndị ị lekọtara ndị a. Eeh.
Na oge ị nọrọ ọdụ na họtel wee rie nri ngwa ngwa. Nye kwuru na m na-eri nri ngwa ngwa oge niile? Oh, ị na-eme. I bidoro n’ọnwa Juun na Julaị.
Ziri ezi. I kwuru na ị dị arọ 514 wee jiri 485th Jan 514. were nọ ebe ịnọ na ọnwa Julaị.
Ya mere, echeghị m na ị na-eji ezi okwukwe ma ọ bụ mbọ ziri ezi ị ga-esi site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri site na kwenyere na ọ bụ gị. (Okwu ndị na-ege ntị) Ana m ekwu na ịkwesịrị ịkwaga ma a ga m enwetara gị onye ga - enyere gị aka ịhazi. Aga m enweta gị onye ga-enye gị atụmatụ nri.
Aga m enweta gị onye ga-enyere gị aka ịhazi ihe a maka gị. Aha ya bụ Robert Reams na ọ bụ onye nkụzi kachasị elu. O gha esi ebe ozo iga erute gi rue ebe ichoro.
Ọ dị mma, ọ bụ azụmahịa. Ọfọn, ekwesịrị m izute Ericin Pasadena, California na Mee 2016. Nke gaara abụ njedebe ikpeazụ ya na njem njegharị ya na-agafe obodo.
Mana nke ahụ emeghị n'ihi na Eric anaghị emecha njem ya. Eric kwuru na ya chọrọ enyemaka ugbu a ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram 700 n’arọ. N'ihi COVID-19 anyị abụghị 'ndị ọbịa na-efe efe ebe a.
Eric na nwunye ya, Angie, nwere njem dị ogologo ma dị mma na RV. Hey dr P Anyị na-aga ugbu a iburu RV anyị ga-akwụ ụgwọ ka anyị nwee ike ịbịa California iji hụ gị wee hụ ihe anyị nwere ike ime iji mee ka m họpụta ọzọ. Gbalia ihu na anyi mee ule COVID n’aga.
Hollywood, anyị na-abịa. (Upbeat music) Nke a bụ ebe anyị na-enweta ule COVID anyị. (Upbeat music) Anim na azu.
Ọ bụ ezie na Maddie bụ onye na-anya ụgbọelu, ị bụ onye na-eso ụzọ Maddie? Ma anyị na-agagharị, anyị na-aga Cali. Nabata na Missouri. Enweghị m ike ịkwọ ụgbọala n'ihi na enweghị m ike ịnọdụ n'oche.
My oxygen etoju bụ n'ezie ala. Aghaghị m ịmalite ile anya na nke a. Malite iji oxygen m.
Ọ na-akụda mmụọ, mana anyị na-eri nri abalị. Anyị ga-akwọ ụgbọala ọzọ echi. (egwu obi ụtọ) Anyị mechara mee ya.
Anyị nọ ebe a. Anyị rụsiri ọrụ ike. Ọ bụ nnukwu ọrụ, mana anyị nọ na California.
Iheụgwọ iji igwe kwụ otu ebe gafee Americanwere ike ịdị iche na-adabere n'ụdị njem na omume gị. Ekwenyesiri m ike na ndị mmadụ jiri aghụghọ jidere onwe haigwe kwụ otu ebenọkwasi naegoihe na-erughị $ 1,000 dollar, mgbe akwadoro yaigwe kwụ otu ebeịnyịnya nwere ikeegoonye na-agba ịnyịnya ígwè na-eru $ 10,000 mgbe emechara ihe niile.Jenụwarị 19 2016 Nọvemba
Kedụ ka m ga-esi gbafee ịnyịnya ígwè m gafee America?
8 Atụmatụ na-aga nke ọmaGbaa ịnyịnya ígwè gafee America
HọrọkaAlaIgwe kwụ otu ebekaNa-agafe na America.
Jikere Tupu Lea HapụBike gafee America.
Malite n'isi ụtụtụ iji tie ọkụ.
Ghọta na You Ga-esiwanye Ike Ka GịBike gafee America.
Na-esetị aka ma gbasaa na ịgba ịnyịnya ígwè.
Etu esi agha iku ugbo ala?
Bidoọzụzụna ebe dị mma, ma ọ bụ kilomita 5 ma ọ bụ 20. Kpoo tupu gịrụpụtana 5 ka 10 nkeji nke mfe spinning. Gbalịanọkwasiọ dịkarịa ala ụbọchị 5 n’izu ma were ọ dịkarịa ala otu ụbọchị ezumike. Mee ka izu ụka kwa izu dị ka o kwere mee (ọ bụghị ihe karịrị 10% kwa izu).
Nke a nwere ike ọ gaghị adị ka ọnọdụ nkịtị anyị na-ese na ya, mana nke a bụ ogige azụ m. O doro anya na oge na-esiri anyị ike n'ebe ahụ ma ọtụtụ n'ime anyị enweghị ike ịbanye na anyịnya igwe na igwe ochie igwe kwụ otu ebe na-ehi ụra ebe a nwa oge, mana echegbula, m bịara iji nyere aka.
Taa, anyị na-ele anya etu esi mepụta mmemme mmega ahụ, n'ụzọ ụfọdụ, na-egosi gị etu esi ahazi ya, otu esi aha ya, ebe ị ga-eme ya, isi, ụdị obere ihe niile ga - enyere gị aka, ọbụlagodi oge oyi ma ọ bụ ndị ahụ siri ike oge N'oge a na obere ihe owuwu iji lanarị. (egwu dị egwu) Ọ dị mma, anyị ga-ahapụ igwe kwụ otu ebe ebe ahụ maka nkeji, echere m, ma banye n'ime ihe m kpọrọ paynecave. Ee, ama m na unu niile na-achị ọchị, mana ọ bụ.
Imirikiti ọzụzụ m na-aga. M na-akwadebe ihe niile m nwere ike ịbụ mkpa na ka na-a ngwa ngwa anya, nri. (Door slam) Anyị abanyela.
Ya mere, lee, m nwere ntọala turbo n'azụ m. Ihe wee banye ọsụsọ, aga m agwa gị nke ọma. Gịnịkwa bụ ihe ahụ? Ka anyị lebakwuo anya n’ihe m kwadebere na mbụ ka ị nwee ike nyere ha aka ịhazi ọzụzụ ka dịtụ.
Ya mere, gịnị ka m jikere tupu mgbe ahụ? Ọfọn, ọ bụ ya, masterpiece. Ama m, ama m. Ọ mara ezigbo mma.
Ihe nke ahụ bụ n'ụzọ dị mfe ngwụcha izu m. Ugbu a, o doro anya, kwa izu dị iche na onye ọ bụla nwere ihe dị iche iche ọ ga-eme na ihe ndị dị mkpa. Ya mere etinyeghị nke a na okwute.
Chọghị nnukwu bọọdụ ochie iji mee nke a. I nwere ike ime nke a na mpempe akwụkwọ na kọmputa gị ihe ochie ochie A4 ma ọ bụrụ na ịchọrọ idebe ihe dị mfe. Mana ọ bụ naanị ezigbo ụzọ iji leba anya n’izu ahụ dum ma kụwaa ya na ngalaba nke izu a.
Ọfọn, anyị nwere akụkụ atọ nke ụbọchị, ụtụtụ, ehihie, na mgbede, nke m chere na ọtụtụ n'ime anyị na-eme mgbatị ahụ nwere ike ime e akụkụ ndị a oge. Bụrụ obere mmega ahụ, ezumike nri ehihie na ezumike ọrụ ma ọ bụ na ezumike mgbe ị na-arụ ọrụ n'ụlọ, tupu ọrụ na n'ezie mgbe ọtụtụ n'ime anyị nwere ike mgbe anyị gachara ọrụ Monday ruo Sunday Ya mere ejiri m n'aka, ọ gwụla ma ị bụ onye na-eme egwuregwu oge niile ma ọ bụ nwee nnukwu oge iji hapụ, anyị ekpuchila ọtụtụ oge mgbe ndị mmadụ nwere ike ịmega ahụ na Monday.
Ugbu a, n'ezie, mgbe izu ụka gachara mgbe ọtụtụ mmadụ ga-agba ịnyịnya ọtụtụ, mana anyị ga-aga nke ahụ. M batara na ya maka onwe m dị ka ụbọchị izu ike maka ụbọchị ahụ dum: Enweghị ije, n'ụtụtụ, n'ehihie, na mgbede m nwere ike ịgbatị, naanị mgbe ike gwụrụ m na ngwụsị izu, ihe dị ka nke ahụ, mana naanị ka m dozie onwe m. Mana ee, naanị iji zuo ike, were ya, rie nke ọma, hie ụra nke ọma, yana gbanyụọ uche wee kwado maka izu na-abịanụ, ana m ewere Mọnde dị ka ụbọchị izu ike rue Tuesday, ugbu a ụtụtụ echi m ka ga-atụ oyi. mgbe ị nọ n'ụlọ, ma ọ bụ mgbe m na-arụ ọrụ m na-aga mgbatị ahụ n'oge nri ehihie, n'ezie ọ bụrụ na ị nwere oge karịa maka aka gị ugbu a ma enwere ike ịnwe oge nri ehihie.
Know mara, ihe bara uru. Na mgbede, n’ihe dị ka elekere 5:30 nke mgbede. emechaa, ihe ga-akacha baara gị uru.
Ana m eme mgbatị kwesịrị ekwesị na. Ugbu a agaghị m ekwu ụdịrị mgbatị ahụ ị kwesịrị ịme n'ihi na nke a bụ isiokwu dị iche iche ị ga - ele anya gị. Ma eeh, o doro anya na ụdị turbo ma ọ bụ usoro ọzụzụ ahaziri ahazi n'ime ụlọ, n'èzí ma ọ bụrụ na ị nwere ike, mana ugbu a ee (kụrụ aka) turbo a, dịka m kwuru.
Wednesday, maka onwe m, ana m ahazi ya na Wednesde bụ ụbọchị dị obere ike. Nke a bụ njem igwe kwụ otu ebe. Ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere ike, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ike, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-atụgharị na turbo ahụ ma ọ bụ mgbatị ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla, ị maara ma ọ bụrụ na ịchọghị ịgba ịnyịnya, mee klaasị mgbatị siri ike dị ala n'ihi na ị mara mma na Tuesday kwesịrị ịzụ ọzụzụ siri ike.
Nke ahụ bụ maka m, ma ị maara ihe ọ bụla na-arụ ọrụ maka gị. Ma eeh, ebe a ka m na-adọta mgbatị igwe eletrik dị ala, nke ahụ ga-ewekarị ọ dịkarịa ala otu elekere. Karịsịa n'oge ọnwa okpomọkụ, otu ọkara na awa abụọ mgbe m nwere ike.
Ọfọn, izu na-aga na ọkụ, ruo Tọzdee. Tọzdee ọzọ anyị nwere ụbọchị nnukwu ike. Ugbu a amaara m na m nwere ike ịdị ka nwoke ihu igwe na-atụ aka na bọọdụ m ebe a, mana ọ na-enyere m aka ịdebe ya, yabụ ọ bụ ụzọ dị mma m na-atụ aro, mana ee, Tọzdee nye m, m ga-eme mgbatị ahụ ma gbaa ịnyịnya.
Ridegba ọsọ ahụ ga-abụ usoro ọzọ dị elu, mgbatị mgbatị, na mgbatị ahụ na n'onwe ya ga-abụ nnọkọ siri ike mara mma. Obere ego dị ebe a bụ ma ọ bụrụ na ị na-eme mgbatị ahụ n'otu ụbọchị, gbalịa ka ị ghara ịmalite mgbatị ahụ n'ihi na ọ ga-emebi ọgba tum tum gị. Elekwasị anya na Isi ahụ ma ọ bụ Isi Na-eche n'echiche banyere ịdị arọ dị ala, ihe dị elu.
Ọ dịghị ihe na-agbajisi gị ụkwụ iberibe na mgbe ahụ mgbe ị banyere na igwe kwụ otu ebe niile ị ga-eme na-alụ ọgụ. Ee ee ị gaghị? erite uru na ya. Ihe ozo kwesiri ekwusi bu na etinyeghi ya na okwute dika m kwuru na mbu.
Nke a abụghị ịbụ-niile na njedebe-niile. Ikwesighi ịgbaso ya. N'inye usoro iheomume ugbu a, ị nwere ike ịhazigharị ihe ndị kachasị mma maka gị.
Nwere ike ịgba ịnyịnya n'ụtụtụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ n'oge ahụ. Na omumu ihe omumu mgbede. Dị ka m kwuru, ọ naghị edobe nkume.
Ọ bụ naanị ezigbo ụzọ dị mma iji hazie ihe na ịdebe ihe, ụdị ụfọdụ ị ga-arapara. Friday mgbe ahụ, izu agafeela. Izu ọrụ agwụla.
Hallelujah, anuru m na ikwuru nke oma, inwere ike ima n’udi na m na ede akwukwo ozo ozo n’ebe a. Know mara na anyị nwere ezigbo ọrụ, ndụ siri ike n'oge a ma ọ dị mkpa. Ọzọkwa, enwere m ike ịgbatị na njedebe, dị ka ụbọchị.
Mana ị maara, nke a bụ n'ezie nhọrọ. Ana m anwa idebe ya mara mma ị maara, na-ejigide ụbọchị a ma na-akwadebe maka nnukwu izu ụka dị n'ihu anyị. Bọchị izu ụka dị nso n'akụkụ nkuku.
Amakwaara m na ọtụtụ n'ime anyị a ga-abụ oge mgbe anyị kwesịrị ịgba ịnyịnya igwe kachasị. Yabụ, m ga-anwale ịnya ụgbọ ịnyịnya siri ike abụọ ruo awa atọ ụbọchị abụọ. Bikegba ịnyịnya ígwè, ma eleghị anya na Satọde, n'ihi ya, ọ na-amasị m ntakịrị okporo ụzọ na ya.
Mountain bike na Sunday n'ihi na mgbe niile m na a ugwu biker. Ana m eme ezigbo ogologo oge n’ọhịa iji nweta kilomita ndị ahụ mana m ga-enwe egwuregwu dị mma wee kụọ akụkụ ole na ole. Maka na emetụbeghị m aka nka na mpaghara ahụ.
Dịka m kwuru, ị nwere ike imeghari ya maka ebumnuche gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye ebe ahụ. Yabụ, ị maara, ị nwere ike iweta nkà. Anọ m ebe a dịka m na-aga njem ụtụtụ n'ụtụtụ, enwere m ike ịlaghachi, zuo ike, rie nri ehihie ma mgbe m ga-apụ ọzọ, enwere m ike ịnwe igwe obere ugwu dị egwu m na-agba n'ehihie.
Mana dịka m kwuru, ọ dabere na ọrụ gị. Sọnde, ogologo njem igwe kwụ otu ebe, ehihie ezumike, gbanye TV, nwee iko tii, lelee GMBN, bulie Ọ dị mfe, yabụ na nke a bụ nyocha izugbe nke izu m, mana enwere ụzọ ndị ọzọ dị mma usoro Atụmatụ gị na ngwaọrụ iji nyere gị aka ime nke a. Ya mere, ka anyị lelee ole na ole m chere, dịka m kwuru, enwere ọtụtụ ngwa, mmemme ịntanetị na weebụsaịtị ị nwere ike iji hazie atụmatụ gị.
Ihe dị ka Strava, Zwift, TrainingPeaks, ma ọ bụ ihe m ji eme ihe bụ Garmin, ị makwaara mmekọrịta a niile na ekwentị gị na ngwaọrụ gị, ma soro gị kerịta data ahụ ma chekwaa ya na nnukwu ebe. Ozugbo inwere data a niile n'otu ebe, nzukọ ga-abata n'ihi na ọ baghị uru inwe ọnụọgụ ndị a niile, mana ọ nweghị ụzọ ịmara ihe ị na-eme ma ọ bụ dozie ha n'ụzọ dị mma, ahaziri ahazi. .
Ugbu a cheta ngwa na ngwa ndị ahụ niile, ha abụghị eziokwu ị chọghị ha, ekwere m gị nkwa. Mana ọ bụrụhaala na ị nwere mpempe akwụkwọ a tụkwasịrị obi na penon ebe a, ị nwere ike idetu ihe ọ bụla ị nwere ike ịntanetị ma ọ bụ ekwentị gị. Peoplefọdụ ndị na - ahọrọ nke a maka na ha nwere ihe siri ike na ihe metụtara ha mgbe ị na - enweghị ekwentị gị n'aka.
Ọ na - emekwa ka ị ghara ịhapụ ekwentị mgbe ụfọdụ. Ya mere, ọ dị mma ịlaghachi isi na atụmatụ nke aka m, emetụla m aka na m ga-eme ọzụzụ ụfọdụ na erukwa ụfọdụ. Ọ bụghị naanị na nke a bụ nnukwu echiche iji mee ka ike gị sie ike, mana ọ ga - enyere gị aka ịnwe ụkwụ ma nwee olile anya izere mmerụ ahụ. Oge eruola ka anyị pụọ ebe a gaa mpaghara ọzọ nke Paynecave ebe m hụrụ n'anya ịme ntakịrị ihe mgbatị m ndị ọzọ wee hụ ihe m na-eme ebe ahụ.
N'ihi ya, m guzobere obere ụlọ ebe a, nke m nwere obi ụtọ. Enweela m ihe mgbochi yoga m, enwetara m obere kettlebell ebe ahụ. Naanị m na-abanye, zoo, mgbe m nọ na mmemme m, anaghị m enwe uche ọ bụla ma ọ na - enyere m aka ilekwasị anya na ọrụ a. Isi ihe dị mkpa na nke a bụ na ọ bụrụ na ịnwere ike itinye ebe n'akụkụ You nwere ike ịmega , nke a na-enyere gị aka ịrapara na ya.
Ọ dịkwa mma ịmara na ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-abụ ahụike ma ọ bụ ọrụ yoga, ị nwere ike jikọta ya na ụdị mgbatị ndị ọzọ. Ya mere, ihe ndị dị ka ịrịgo, ịgba ọsọ, igwu mmiri, mmetụta dị ala, wdg. Ihe ndị a niile ga-enyere gị aka na usoro obi gị gbakwunye na ịgba ígwè gị
Amaara m na o siri ike ugbu a, anyị anaghị apụ n'ụzọ dị mfe ahụ, mana ihe ọbụla ị nwere ike ime iji gwakọta ya na yad gị, ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ, debe ya iche na nke ga-eme ka ọ maa mma na atụmatụ a. Daalụ maka ikiri na ịhụ gị n'oge na-adịghị anya.
Cycgba ígwè ịgba kilomita iri n’ụbọchị ọ dị mma?
Cygba ígwèbụ ụzọ zuru oke iji meziwanye ahụike gị na akwara - ịrụ ọrụ nke obi gị, ngụgụ na sistemụ ọbara. Gbalịa ọnụ ọgụgụ a maka nha:ịgba ígwènaanị20 kilomitaotu izu na-ewedata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa obi n'ihe na-erughị ọkara nke onye na-emega ahụ.
Kedu ụzọ dị mma iji agba igwe kwa ụbọchị?
Ndị ọkachamara na-atụ aro nkeji iri atọ mmega ahụ kwa ụbọchị maka okenye na iri isii nke ụmụaka. Ihenkezionye na-agba ịnyịnya ígwè na-agba kilomita iri na abụọ ruo kilomita iri na abụọ n’otu elekere (n’ịgbatịghị ọsọ) Ya mere, ị nwere ike ịmalite site na ihe dị ka kilomita 5 kwa ụbọchị — na-eche na ị naghị emega ahụ ọ bụla.Ọkt 9 2020
Ebee ka m ga-ehi ụra mgbe ịnyịnya ígwè gafee America?
Nhọrọ kachasị mma maka ịchọta ebe dị mmahie ụrairi aigwe kwụ otu ebetour raara onwe ya nye ogige. Dabere na ụzọ, aigwe kwụ otu ebenjem naAmerịkanwere ike iburu gị gafere ọtụtụ ogige ntụrụndụ mba, ogige ntụrụndụ steeti, na oke ọhịa mba.26.09.2016
Kedu ụzọ kachasị mma iji gbafee igwe gafee America?
1. TransAmericaUtezọ Okporo kezọ. Na TransAmericaUtezọ Okporo kezọbụ kpochapụwoigwe kwụ otu ebengagharịagafe gafee America. Na kilomita 4,626, ndịụzọmalite na Astoria, Oregon, ma kwụsị na Yorktown, Virginia.08.23.2019
Ebee ka m ga-ehi ụra na njem njem igwe kwụ otu ebe?
Nhọrọ kachasị mma maka ịchọta ebe dị mmaihi ụra na njem igwe kwụ otu eberaara onwe ya nye ogige. Dabere naụzọ, kanjegharị igwe kwụ otu ebena America nwere ike iduru gị gabiga ọtụtụ ogige obodo, ogige ala, na oke ohia mba.Sep 26 2016
Kedu ihe m kwesịrị iri na njem ịnyịnya igwe 200?
Ezigbo nri ụtụtụ tupu ị banye naigwe kwụ otu ebebụ ihe dịka porridge e ji mmiri ara ehi mee. Nke a na - enye gị carbohydrates nwayọ nwayọ nke ga - enye gị mmanụ na - enyere gị aka mgbe ị buru ibunọkwasi, yana protein ụfọdụ. Akpa na àkwá bụ nhọrọ ọzọ dị mma.05.28.2017
Nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè 200 kilomita n'otu ụbọchị?
Na-agba ịnyịnya200 kilomitan'imeotu ụbọchịdị 'okpukpu abụọ karịa' karịa ịnya 100 na aụbọchị. Ọ ga-achọ n'ezie pacing nwere ọgụgụ isi yana ike isi ike. Obere ihe nile na enye nsogbugịbanyere giigwe kwụ otu ebedabara ga na-eti mkpu nagịebe tupu imecha.06.07.2016
Ọ nwere ụzọ ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị na United States?
East Coast Greenway bụ nwa mara mma nke mmekọrịta ịhụnanya nke mba anyị na ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Thezọ nke 3,000-mile ga-emesị jikọọ rails na ụzọ ụkwụ ejiri ọtụtụ paịment gafee steeti 15 wee gbadaa na East Seaboard.
Kedu ụzọ kachasị mma iji agafe igwe US?
Ahọrọ m kpochapụwo ụzọ TransAmerica, nke bụ otu n'ime ụzọ ndị kachasị ewu ewu iji jiri igwe kwụ otu ebe gafee US. Dabere na atụmatụ Adventure Cycling Association, ihe dị ka otu puku mmadụ gafere US na TransAmerica Route na oge ọkọchị ọ bụla.
Ebee ka njem njem gafere na-akwụsị ma kwụsị?
Ọ bụ ụbọchị 52 na - agafetụkarị nke na - agbachitere kilomita 80 + kwa ụbọchị ma gafere site na 13 steeti. Milezọ nke 3829 na-amalite site na mkpịsị ụkwụ na-aga na Pacific Ocean na San Francisco, California wee kwụsị site na wiil wheel na Atlantic Ocean n'akụkụ Portsmouth, New Hampshire.